Ny tena mahaliana an-toerana Food To Try In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny tena mahaliana an-toerana Food To Try In Eoropa
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 24/02/2020)
Raha ny amin'ny kaontinanta samihafa toy ny kolontsaina ho Eoropa, dia afaka miloka ny gastronomic fomba amam-panao dia toy ny isan-karazany! Raha toa ianao vonona ny hanohitra ny fahaizanao nidina isan-karazany mahaliana (isika dia mampiasa izany teny voan'ny eto) saran-dalana, dia mba jereo kely ny lisitry ny sakafo ao an-toerana mahaliana hanandrana tany Eoropa sy izay ahitana izany fotsiny – ary angamba raha mibosesika ho any amin'ny mahatsiaro liana ianao na be herim-po.
Ny tena mahaliana eo an-toerana mba hanandrana sakafo tany Eoropa: Schwarzenauer
Ny foto-kevitra ny sakafo natao tamin'ny ra avy hatrany dia mahatonga antsika hieritreritra ny Scottish sakafo nentim-paharazana ny Haggis. A hanim pudding misy hongotan'ny ondry (am-po, aty, sy ny havokavoka); toto-kena- miaraka amin'ny tongolo, oatmeal, suet, zava-manitra, sy sira, afangaro amin'ny stock, ary nandrahoina nandritra ny fomban-drazana natorom-bavony. Noho izany, ny foto-kevitra ny ra lasopy dia tsy miavaka ny Alemaina, fa Schwarzsauer, sy ny hanim tsirony, dia.
Nataon-be ny ran'ny kisoa (na mainty pudding), gisa giblets, ary vinaingitra, ary koa ny kanelina, jirofo, peppercorns, sy ny zava-manitra hafa, izany manokana avy amin'ny faritra avaratr'i Alemaina, dia ny zavatra ny Vegan nanonofy ratsy.
Soa ihany fa ny iray vilia baolina ny Schwarzsauer ana-panahy ataony dia hikarakara ny proteinina ilaina ny sisa ny andro. Ny vaovao ratsy dia hoe ny tsirony mahery (ary ankasitrahana) dia tsy zavatra izay mahafinaritra ny rehetra.
Izany no lovia hahita amin'ny tsena eo an-toerana na ny sakafo nentim-paharazana trano fisakafoanana. Ity iray Cafe hitanay fa manompo azy, Cafe Black Sauer dia jereo izany!
Ny tena mahaliana eo an-toerana mba hanandrana sakafo tany Eoropa: Filmjolk
Filmjolk fantatra koa amin'ny hoe Fil, dia nentim-paharazana masirasira vokatra ronono avy any Soeda, ary iraisana vokatra ronono ao anatin'ny firenena Nordic. Izany dia atao amin'ny rononon fermenting ombivavy amin'ny bakteria isan-karazany avy amin'ny karazana sy Leuconostoc Lactococcus lactis mesenteroides. Ny bakteria metabolize lactose, ny siramamy voajanahary hita ao amin'ny ronono, ho lactic asidra izay midika hoe ny olona izay lactose fandeferana dia afaka handefitra izany tsara kokoa noho ny hafa ny vokatra ronono. Ny asidra filmjolk manome tsiro ny marikivy, ary mahatonga ny proteinina ao amin'ny ronono, indrindra casein, mba coagulate, dia toy izany no thickening ny vokatra farany. Ny bakteria ihany koa mamokatra voafetra habetsahan'ny diacetyl, iray amin'ny buttery iombonana amin'ny tsirony, izay manome tsiro mampiavaka ny filmjolk.
Tsy tanteraka isika nivarotra tamin'ny ity, fa nangataka ny tena mahaliana eo an-toerana mba hanandrana sakafo tany Eoropa, tsy ny tastiest 😆
Ny tena mahaliana eo an-toerana mba hanandrana sakafo tany Eoropa: mpiandry Hove
Rehefa mieritreritra ny skandinavianina Noely, kanelina scrumptious mofomamy sy ny gravdlax mety mitsimoka ao an-tsaina. Inona no mety tsy hieritreritra fa smalahove. (Hatanjaho hiatrika ny tenanareo) A nandoro ary nahandro zanak'ondry Lohan'alika no atao fireharehan'ny toerana eo amin'ny latabatra sakafo hariva Noely. Miaraka amin'ny ovy, matavy sy nopotsehina swede. Na iza na iza no manam-bintana hanandrana ampy lovia ity, manana ny fahafinaretana ny chowing teo amin'ny fattiest potika voalohany - ny maso, salohim-bary, ary ny lelany no ahitana raha - alohan'ny scooping ny sisa amin'ny lohany avy amin'ny sotro. Izany no - Merry Noely!
Ny tena mahaliana eo an-toerana mba hanandrana sakafo tany Eoropa: hareng
Andao hifarana izany eny amin'ny tastier naoty, hataontsika ve? Ny ankamaroan'ny olona mahalala momba ny Danoà dibera mofomamy (smakager), ary liquorice (licorice), fa ahoana kosa ny momba ny sakafo sy ny hafa goodies?
Herring dia tena malaza dia Danemark! Tsy amidy nifoka, curried, marinated, na araka ny Sol Over Gudhjem. Tiana indrindra izy io indrindra any amin'ny nosy Bornholm any Danemark. 'Masoandro ambonin'i Gudhjem'. Nadika hoe 'masoandro ny Gudhjem' – ny tanàna amin'ny Bornholm. Dia buttered ampemby tapa-mofo. Nofaranan'ny paikady amin'ny Herring, mena tongolo, ary atody atody. Trondro hafa toy ny salmona, plaice, ary ny lamoria dia mihinana amin'ny dressings toy ny persily saosy sy ny ovy.
Moa ny vavanao manondraka ho an'ny eo an-toerana Ny tena mahaliana hanandrana sakafo tany Eoropa? Boky traikefa nahafinaritra ny manaraka noho ny fanampian'ny Save A Train !
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finteresting-local-food-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#localfood europetravel Tendan-kanina trainjourney Train Travel